ပါရာဆဲလ်ဆပ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၅၃၈ က ပုံတူပန်းချီ (Augustin Hirschvogel ၏ လက်ရာ)
Egg, Einsiedeln, Schwyz, ရှေးယခင် ဆွစ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ (ယနေ့ခေတ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ)
၂၄ စက်တင်ဘာ၊ ၁၅၄၁(1541-09-24) (အသက် ၄၇)
Salzburg, Archbishopric of Salzburg]] (ယနေ့ခေတ် ဩစတီးယားနိုင်ငံ)
Philippus Aureolus Theophrastus, Doctor Paracelsus
အနောက်တိုင်း ဒဿန အဝန်းအဝိုင်း
Thomas Muffet, Franciscus Sylvius, Sir Thomas Browne, Jan Baptist van Helmont, Adam Haslmayr, Gabriel François Venel (disputed), Jane Bennett, Giorgio Agamben
ပါရာဆဲလ်ဆပ်စ် (ဂျာမန်: Paracelsus; /ˌpærəˈsɛlsəs/; ၁၄၉၃ ဝန်းကျင် – ၁၅၄၁ စက်တင်ဘာ ၂၄), ငယ်အမည် Theophrastus von Hohenheim (အပြည့်အစုံ: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim) သည် ဆွစ်လူမျိုး သမားတော်၊ အဂ္ဂိရတ်ဆရာ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် ဘာသာရေးဆရာ၊ ဂျာမန်ခေတ်ဆန်းချိန်မှ ဒဿနဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ခေတ်ဆန်းချိန်၌ ဆေးပညာ ပြန်လည်နိုးထ တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုတွင် အဓိကကျသော ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတစ်ဦးဖြစ်ကာ လေ့လာသိရှိထားသော အသိဉာဏ်နှင့် လေ့လာစူးစမ်းခြင်းတို့၏ ပေါင်းစပ်တန်ဖိုးကို ဇောင်းပေးဆိုခဲ့သူဖြစ်ပြီး အဆိပ်ပညာ (toxicology) ၏ ဖခင်ဟု ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ပါရာဆဲလ်ဆပ်စ်ကို ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သူ၊ ဂမ္ဘီရပညာသုံး ဟောပြောနိုင်သူအဖြစ် အထင်ခံရ၍ ၎င်း၏ Prognostications ကျမ်းစာကို ၁၆၀၀ နှစ်များ၌ ရိုဇီခရူးရှန်ဝါဒီများက လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ပါရာဆဲလ်ဆီယံ (အယူအဆ) (Paracelsianism) သည် ၎င်း၏ လက်ရာစာပေများက စေ့ဆော်လိုက်သော အစောပိုင်း ဆေးပညာဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Pagel (1982) p. 6, citing K. Bittel, "Ist Paracelsus 1493 oder 1494 geboren?", Med. Welt 16 (1942), p. 1163, J. Strebel, Theophrastus von Hohenheim: Sämtliche Werke vol. 1 (1944), p. 38. The most frequently cited assumption that Paracelsus was born in late 1493 is due to Sudhoff, Paracelsus. Ein deutsches Lebensbild aus den Tagen der Renaissance (1936), p. 11.
↑ Einsiedeln was under the jurisdiction of Schwyz from 1394 onward; see တမ်းပလိတ်:HLS
↑ Manchester Guardian, 19 October 1905
↑ The physician and philosopher Sir Thomas Browne။
↑ Josephson-Storm၊ Jason (2017)။ The Myth of Disenchantment: Magic, Modernity, and the Birth of the Human Sciences။ Chicago: University of Chicago Press။ p. 55။ ISBN 978-0-226-40336-6။
↑ CISSC Lecture Series: Jane Bennett, Johns Hopkins University: Impersonal Sympathy။ Center for Interdisciplinary Studies in Society and Culture, Concordia University, Montreal (22 March 2013)။ 28 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Paracelsus"၊ Britannica၊ 24 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Paracelsus: Herald of Modern Toxicology။
↑ "Paracelsus and Roman censorship – Johannes Faber's 1616 report in context" (2017). Intellectual History Review 28 (2): 5. doi:10.1080/17496977.2017.1361060.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါရာဆဲလ်ဆပ်စ်&oldid=686277" မှ ရယူရန်
၁၆ ရာစုနှစ် သိပ္ပံပညာရှင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။